Standard sy ny politika-G STAR TRADING voafetra
Fenitry ny orinasa
Ny propulsion matanjaka dia avy amin'ny atiny anatiny matanjaka foana.
• Hatsarao ny fifaninanana amin'ny mpanjifa
Ny mpanjifa no lakilen'ny fahombiazantsika. Izahay dia mizara ny zavatra niainanay amin'ny mpanjifanay ary manome vahaolana feno ho azy ireo hahatratrarany ny tanjon'izy ireo amin'ny fomba mahomby sy mahomby.
• Ny fanavaozana dia mitarika ho amin'ny ho avy
• Manatsara ny sandan'ny orinasa
Miteraka fitomboana mahasoa izahay mba hiantohana ny fahombiazana maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny portfolio arahin'antoka voalanjalanja. Miezaka ny tonga lafatra isika ary mikatsaka ny hatsarana.
• Tanteraka ny nofinofin'ireo mpiasa
Mpiasa miavaka no fototry ny fahombiazan'ny orinasanay. Ny kolontsain'ny orinasanay dia miavaka amin'ny faharetana, ny mangarahara ary ny fifanajana. Mamporisika ny mpiasanay izahay haka ny fananany ary hiara-hitombo amin'ny orinasa.
• Raiso ny andraikitra ara-tsosialy
Izahay dia mirotsaka amin'ny fampiroboroboana ny fizotran'ny fampandrosoana sosialy amin'ny alàlan'ny fanatsarana, sosokevitra ary teknolojia vaovao. Izahay dia manolo-tena amin'ny soatoavina manerantany, zom-pirenena tsara ary tontolo iainana mahasalama. Ny fahamendrehana dia mitarika ny fitondran-tenantsika amin'ireo mpiasanay, mpiara-miombon'antoka ary tompon'antoka.
Politika momba ny kalitao: Fitiavan-tena ho an'ny hatsarana
• Fandeferana amin'ny kilema
Ny hetsikay dia mitodika any amin'ny fisorohana mafy ny tsy fahombiazan'ny vokatra sy ny fizotranay. Izahay dia mihevitra ny Zero Defects ho tanjona kendrena. Manohana ny fanatsarana ny vokatra sy ny fizotrany izahay.
• Fahafaham-po ny mpanjifa
Ny hetsikay dia mifantoka amin'ny mpanjifa ary manolo-tena izahay hampivelatra fiaraha-miasa mahomby hatramin'ny voalohany, manomboka amin'ny fampiharana ny fitantanana tetikasa mahomby sy ny fanodinana ka hatramin'ny famatsiana boky, mandritra ny androm-piainana rehetra.
• Fanatsarana tsy tapaka
Ny fitsipiky ny anay amin'ny asa aman-draharaha dia ny manatsara hatrany ny fifaninanana. Ny fananana fanadihadiana lalim-paka amin'ny alàlan'ny fampiharana PDCA sy enina fitaovana enina Sigma, fanatsarana haingana sy haingana ny vokatra sy ny fizotrany, ny fizarana fanao tsara indrindra ary koa ny fanavaozana no fototry ny fitomboan'ny kalitao sy ny famokarana.
• Mamporisika ny toe-tsain'ny mpandraharaha, ny fanomezam-pahefana ary ny fidiran'ny mpiasanay amin'ny alàlan'ny fampivelarana hatrany sy amin'ny fomba tsy tapaka ny fahalalana, ny traikefa ary ny fahaiza-manao.
• Politika momba ny fahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana, asa
• Tompon'andraikitra amin'ny fampanantenan-tsika momba ny tontolo iainana isika, manaraka ny fepetra takian'ny lalàna sy hafa, ary koa mamorona toeram-piasana azo antoka sy salama ho an'ny mpiasa rehetra amin'ny fotoana rehetra.
• Ny fiantohana ny tontolo iainana azo antoka, salama ary azo antoka dia ampahany amin'ny andraikitsika ara-tsosialy.